2aad Gen 2004 2005 2006 Dodge Durango Fog Light Assembly Bedelida
Bogga ugu weyn > Dodge
2003-2018 Dodge Ram 1500 Bedelka Iftiinkii Shatiga Ramin 1500 2500 3500 Nalalka Shatiga Laydhka LED
48W Beddelista Nalalka Laydhka Fog Beddelka loogu talagalay Dodge Ram 1500 Qaadista 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dayactirey 9006 LED Fog Lights Accessories for Dodge Ram 1500 2500 3500 / loogu talagalay Qaybta Dodge Durango ee Dodge Ram 1500 Laydh Fog
Nalalka ceeryaamo horseedda/wadida wadista gen 2nd Dodge Durango 2004 2005 2006, kordhi badbaadada wadada wakhti kasta.
Beddelka kulanka nalka fog ee Dodge Durango wuxuu ku habboon yahay in lagu wado xaaladaha cimilada kala duwan sida cimilada duufaanka, roobabka culus, ceeryaamo iyo habeen aan dayax lahayn. Nalalka ceeryaamo-kaaliyaha ah ee led ayaa soo saara alwaaxyo dhalaalaya oo aad u sarreeya iyo sidoo kale siinta gaariga qalab cusub. Nalalka ceeryaamo ee Gen Dodge Durango ee 2aad waxay ku habboon yihiin 2004-2006 Dodge Durango, 2002-2008 Dodge Ram 1500, 2003-2009 Dodge Ram 2500 iyo 2003-2009 Dodge Ram 3500.
Cadaynta Bedelka Golaha Iftiinka ee Dodge Durango Fog
Ballaca 154.5mm / 6.08inch
qoto 159.6mm / 6.28inch
Xidhiidhiyaha ama Xargaha H4
Sawirro badan oo Dodge Durango Fog Light Assembly Beddelida
Sifada 2005 2006 Dodge Durango Fog Assembly Beddelka
Si fudud loo Rakibi karo: Laambadaha ceeryaamada ah ee xidhan waxa loogu talagalay in si degdeg ah oo fudud loo rakibo. Xiritaanka tooska ah ee baabuurka asalka ah, looma baahna suun silig dheeraad ah, kaliya si toos ah ugu xidh adabtarada saamiyada. Kaliya waxay kugu qaadanaysaa 15-20 daqiiqo inaad dhamaystirto rakibaadda.
Dhisme waara: Waxaa lagu qalabeeyay dabool PC saafi ah, qaboojin la cusboonaysiiyay iyo nidaamka qaboojinta Kaas oo ay ku adag tahay in lagula tacaalo dhammaan noocyada xaaladaha xun, mana fududa in la xoqo muraayadaha caagga ah ee caadiga ah.
IP67 biyuhu waxay ku qiimeeyeen: Tijaabo xoog-badan ka dib, xitaa xilliga jiilaalka qabow, ma jirto xaalad nalalka aan la shidin cimilada qabow awgeed. Iyada oo lagu qiimeeyo biyo -mareenka IP67, biyuhu wax -ku -ool u yihiin dhammaan xaaladaha cimilada.
Faafin Kulayl aad u fiican: Nidaamka qaboojinta iyo naqshada godka neefsashada khaaska ah ee ku yaal xagga dambe ee guryaha aluminiumka, waxay caawisaa sii -deynta qoyaanka iyo kulaylka gudaha qolofka.
Iftiin sare: Kuul laambad caado ah oo horumarsan, 6500K soo saarid iftiin cad, u dhow heerkulka midabka iftiinka maalinta, kordhinta aqoonsiga wadada, dhalaalka sare si loo hubiyo badbaadada wadista.